Coronavirus oo kar-kaarada jebsanaya, dad hor leh oo u dhimanaya ama qaadaya daqiiqadiiba! – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Maxamed Cismaan / March 30, 2020 March 30, 2020
Muqdisho(SONNA)-Cudurka Corona-virus (COVID-19) ayaa aad uga sii fidaya dunida oo dhan, si gaara ah, Mareykanka iyo Yurub marka laga soo tago dalka Shiinaha oo ahaa meesha uu cudurkan ka soo bilowday, waxaana dadka cudurkan saf-mareenka ah ku dhacay uu ku dhawanayaa hal milyan.
Cudurkani waxa uu galaaftay nolosha in ka badan 34,000 oo ruux, waxa uuna ku dhacay in ka badan 700,000 ruux halka 150,000 kale oo dunida oo dhan ah ay ka soo bogsadeen, kuwa soo bogsaday badidooda waa Shiinaha, sida lagu qoray web-ka lagu aruuriyo xogaha cudurkan ‘Worldometers’, waxaana daqiiqad walba kordhaysa dadka u dhimanaya iyo kuwa hor leh ee uu ku dhacayo.
10-ka dal ee cudurka Corona-virus aadka u sameeyey welina qaar uu ku fidayo waxaa kamida: Shiinaha, Talyaniga, Isbeyn, Mareykanka, Jarmalka, Iiraan, France, K/kuuriya, Switzerland iyo Ingiriiska, waxaana ay kala riixinayaan kaalimaha hore ee shaxda.
Dhimashada Talyaaniga waa wax ka badan 3-dex meelood meel guud ahaan caalamka dalalka xigana waa Spain iyo Shiinaha, balse cudurkan waxa uu wada gaaray qaarada Yurub oo dhan, waana meesha uga badan ee laga oo soo warinayo dad u dhiminaya ama ku dhacay wakhti xaadirkan, meesha xigtana waa Mareykan-ka oo isna wada gaaray gobaladiisa.
Saameynta Cudurka Corona Virus
Waxa uu saameyn xun uu ku yeeshay dhaqaalaha adduunka oo dhan, dal kastana si buu u saameyey, waxaana ka dhashay in la isu socon waayey dhul, cir, bad iyo dhaq-dhaqaaqa caadiga ah ee bulshooyinka iyo wax-soo saarka warshadaha.
Cudurkan dawladaha ayuu ku qasbay in ay qaatay go’aano qaraar oo al-baabada u laabay dhamaan waxyaabihii aas-aasiga u ahaa nolosha bulshooyinka ay madaxda u yihiin, waxaana kamida meelaha uu sida daran u saameyey Waxbarashada, Ganacsiga, duulimaadyada, shirarka, iyo dadka lagu qasbay in guryahooda dhaafin.
Waxaa sidoo kale la mamnuucay booqashada Cusbitaallada, waxana sidoo kale uu saameyey goobaha lagu cibaadaysto.
Shirkii golaha amaanka oo maalinta Khamiista March 26, 2020 dhici lahaa ayaan qabsoomin sababa la xiriira cudarkan oo magaalada New York kaliya in ka badan 50’000 oo ruux uu haleelay, waxa sidoo kale sannadka 2021 loo dhigay ciyaarihii Olompic-da oo Japan lagu qaban lahaa.
Afrika a iyo Cabsida Cudurka
Afrika wel welka iyo cabsida cudurkan waxaa u dheer in aysan lahayn adeeg caafimaad oo tayo leh iyo xitaa qalabkii lagu baari lahaa cudurkan, Senegal iyo K/Africa kaliya ayaaba lahaa qalabka lagu baaro bartamihii Febrayo ee sanadkan, inkasta oo hadda ku dhawaad 20 kale oo dal ay baari karaan cudurkan, waxaana jira dalal Africa oo weli baaritaankooda u dirsada dalal Yurub ama Africa-da ku yaala.
Dalalka Africa oo dhan waxa uu cudurkan ku dhacay waa wax ka yar 2000 oo ruux, balse waxa intaa ka daran oo liita wacyiga dadka iyo fahamka ay ka qabaan cudurka aadka u fidaya oo maalin walba kiisas hor leh laga diiwan gelinayo Africa dhex-deeda halka dunida kale ay daqiiqad walba xisaabta is bedelayso.
Bariga Africa ayuu soo gaaray Cudurkan, waxaana tirada uga badan laga diiwaan geliyey dalka oo aan deriska nahay ee Kenya oo maalinta Jimcaha oo todobaadkii hore bandow lagu soo rogay, waxana ay mareysaa 42-kiis, halka anaga Soomaliya la diiwaan geliyey kiiskii 3-aad.
Waxa ay ila tahay in aynaan dhayal-san khatarta cudurkan Coronavirus oo kar-kaarada soo jebsanaya, dad hor lehna u dhimanaya ama qaadaya daqiiqadiiba, waa inaan si dhaba oo ficil ah u qaadana talooyinka caafimaad ee nala siiyo, Eeba ha inaga xafidee. !
Waxaa diyaariyey: Maxamed Cismaan Cabdi ‘Black Cobra”